အသက် ၁၂၀ ပြည့်​ခါနီးပြီဖြစ်တဲ့ ကချင်ပြည်နယ် ခေါင်လံဖူးမြို့နယ်မှ ဘိုးဘိုးကြီးဦးဆမ်ဘုံဒီ - Maythadin
အသက် ၁၂၀ ပြည့်​ခါနီးပြီဖြစ်တဲ့ ကချင်ပြည်နယ် ခေါင်လံဖူးမြို့နယ်မှ ဘိုးဘိုးကြီးဦးဆမ်ဘုံဒီ
May Thadin | November 12, 2020 | Knowledge, News | No Comments
အသက် ၁၁၉ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ကချင်ပြည်နယ် ခေါင်လံဖူးမြို့နယ် ဖမ်တုံရွာမှ ဦးဆမ်ဘုံဒီး ကချင်ပြည်နယ် ခေါင်လံဖူးမြို့နယ်ဖမ်တုံရွာမှ မှတ်ပုံတင်အမှတ်၁/ခဖဒ(နိုင်)၀၀၈၉၁၁ ကိုင်ဆောင်သော ရဝမ်လူမျိူး ဦးဆမ်ဘုံဒီး၏ အိမ်ထောင်စု၌ဖော်ပြချက်အရ၎င်း၏မွေးသက္ကရာဇ်မှာ(၁၃.၆.၁၈၉၇)
ဖြစ်ပြီး ယခုလာမည့်ဇွန်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် အသက် ၁၁၉ နှစ် ပြည့်တော့မည်ဖြစ်သည်။ဦးဆမ်ဘုံဒီးသည် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအတိတ်သမိုင်းများကို ပြန်လည်ပြောပြနိုင်ပြီးငယ်ရွယ်စဉ်အခါက ပူတာအိုမြို့သို့ တစ်ကြိမ်ရောက်ဖူးကြောင်း၊ ကွမ်း ဆေးလိပ် အရက်သောက်သုံးခြင်းမရှိကြောင်းလည်း
သိရသည်။ လက်ရှိအချိန် ကမ္ဘာ့ဂရင်းနစ်မှတ်တမ်းတွင် ကမ္ဘာ့အသက်ကြီးဆုံး အမျိုးသား မှာအသက် ၁၁၂ နှစ် အရွယ်အစ္စရေးလူမျိူး ??????? ??????? ဖြစ်ပြီး သူ၏မွေးသက္ကရာဇ်မှာ စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ ၁၉၀၃ ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာ့အသက်အကြီးဆုံး ဂင်းနစ်စံချိန်တင်နိုင်ဖို့ ပရိသတ်ကြီး ရှဲပြီးမျှဝေပေးကြပါနော်။ အချိန်ပေးပြီးဖတ်ရှု့ပေးကြသော ပရိတ်သတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ ကျေးဇူးလည်းအထူးတင်ရှိပါတယ်နော်။ ခရက်ဒစ်
အသကျ ၁၁၉ နှဈရှိပွီဖွဈတဲ့ ကခငျြပွညျနယျ ခေါငျလံဖူးမွို့နယျ ဖမျတုံရှာမှ ဦးဆမျဘုံဒီး ကခငျြပွညျနယျ ခေါငျလံဖူးမွို့နယျဖမျတုံရှာမှ မှတျပုံတငျအမှတျ၁/ခဖဒ(နိုငျ)၀၀၈၉၁၁ ကိုငျဆောငျသော ရဝမျလူမြိူး ဦးဆမျဘုံဒီး၏ အိမျထောငျစု၌ဖျောပွခကျြအရ၎င်းငျး၏မှေးသက်ကရာဇျမှာ(၁၃.၆.၁၈၉၇)
ဖွဈပွီး ယခုလာမညျ့ဇှနျလ ၁၃ ရကျနတှေ့ငျ အသကျ ၁၁၉ နှဈ ပွညျ့တော့မညျဖွဈသညျ။ဦးဆမျဘုံဒီးသညျ ဖွဈပကျြခဲ့သောအတိတျသမိုငျးမြားကို ပွနျလညျပွောပွနိုငျပွီးငယျရှယျစဉျအခါက ပူတာအိုမွို့သို့ တဈကွိမျရောကျဖူးကွောငျး၊ ကှမျး ဆေးလိပျ အရကျသောကျသုံးခွငျးမရှိကွောငျးလညျး
သိရသညျ။ လကျရှိအခြိနျ ကမ်ဘာ့ဂရငျးနဈမှတျတမျးတှငျ ကမ်ဘာ့အသကျကွီးဆုံး အမြိုးသား မှာအသကျ ၁၁၂ နှဈ အရှယျအစ်စရေးလူမြိူး ??????? ??????? ဖွဈပွီး သူ၏မှေးသက်ကရာဇျမှာ စကျတငျဘာလ ၁၅ ရကျနေ့ ၁၉၀၃ ဖွဈသညျ။
ကမ်ဘာ့အသကျအကွီးဆုံး ဂငျးနဈစံခြိနျတငျနိုငျဖို့ ပရိသတျကွီး ရှဲပွီးမြှဝပေေးကွပါနျော။ အခြိနျပေးပွီးဖတျရှု့ပေးကွသော ပရိတျသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာသောနလေ့ေးဖွဈပါစေ ကြေးဇူးလညျးအထူးတငျရှိပါတယျနျော။ ခရကျဒဈ
မွနျမာနိုငျငံကကဆြုံးသှားတဲ့ သူရဲကောငျးတှအေတှကျ မိုးထဲလထေဲမှာတောငျ ဆုတောငျးပှဲပွုလုပျပေးခဲ့ကွတဲ့ တောငျကိုရီးယားပွညျသူမြား